NE555: यो बहुउद्देश्यीय चिप बारे सबै | नि: शुल्क हार्डवेयर
NE555: यो बहुउद्देश्यीय चिप बारे सबै
555 एकीकृत सर्किट सबैभन्दा प्रसिद्ध चिपहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू। यो विभिन्न रूपहरूमा आउन सक्छ, जस्तै NE555, NE555C, LMC555, TLC555, uA555, MC1455, LM555, आदि। यो सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो भन्ने कारण यसको बहुमुखी प्रतिभा हो, र अनुप्रयोगहरूको संख्या जसको लागि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
यस गाइडमा तपाईंले सिक्नुहुनेछ तपाईलाई यो चिपको बारेमा चाहिने सबै कुरा, साथै तपाईंको भविष्यका परियोजनाहरूमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, सस्तोमा किन्न सिफारिसहरू, आदि।
1 NE555 के हो?
1.1 NE555 निर्दिष्टीकरणहरू
1.3 555 को इतिहास
1.4 NE555 आवेदनहरू
2 555 कन्फिगरेसनहरू
3 सस्तो NE555 कहाँ किन्न
NE555 के हो?
NE555, वा केवल 555, एक आईसी को लागी प्रयोग गरिन्छ पल्स, दोलन वा टाइमरको रूपमा उत्पन्न गर्नुहोस्। तसर्थ, यो एक थरथरानवाला रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, ढिलाइ उत्पन्न गर्न, आदि। तपाईले यसलाई सामान्यतया विभिन्न प्याकेजहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि सबैभन्दा सामान्य 8-पिन DIP हो (त्यहाँ 14-पिन भेरियन्टहरू छन्), यद्यपि यो गोलाकार धातु प्याकेजमा र सतह माउन्टको लागि SMD मा पनि हुन सक्छ।
यो पनि कम खपत संग NE555 को संस्करणहरू फेला पार्न सम्भव छ, र पनि डबल संस्करणहरू। यी दोहोरो संस्करणहरूमा,2समान सर्किटहरू भित्र समावेश छन्, दुई गुणा धेरै पिनहरू सहित र सामान्यतया 556 को रूपमा चिनिन्छ।
प्राविधिक स्तरमा, यो सर्किट लगातार एक Vcc भोल्टेज संग संचालित हुनुपर्छ, र आउटपुट एक पर्याप्त उच्च वर्तमान तीव्रता एक एकीकृत सर्किट हुन सक्छ। वास्तवमा, यो चिप पनि सक्छ प्रत्यक्ष ड्राइभ रिले र अन्य उच्च-नाली सर्किटहरू अतिरिक्त कम्पोनेन्टहरूको आवश्यकता बिना। तर, यसलाई कार्य गर्न सक्षम हुन बाह्य घटकहरूको न्यूनतम संख्या चाहिन्छ (नियन्त्रित हुन)।
के हो भनेर धेरैलाई आश्चर्य हुनेछ यो एकीकृत सर्किट भित्र के छ। NE555 भित्र, अघिल्लो छविमा देख्न सकिन्छ, त्यहाँ दुईसँग ब्लक रेखाचित्र छ परिचालन एम्पलीफायरहरू तुलनाकर्ताको रूपमा माउन्ट गरिएको, यसको नकारात्मक आउटपुटको प्रयोग गर्ने RS प्रकारको बिस्टेबल सर्किट, त्यो आउटपुट करन्टलाई समर्थन गर्नको लागि इन्भर्टिङ आउटपुट बफर, र समयको लागि बाह्य क्यापेसिटर डिस्चार्ज गर्न प्रयोग गरिने ट्रान्जिस्टर।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ3आन्तरिक प्रतिरोधकहरू छन् जुन सेटिङको लागि जिम्मेवार छन् सन्दर्भ स्तरहरू पहिलो अपरेशनलको इन्भर्टरको इनपुटको, र दोस्रोको ननइन्भर्टिङमा क्रमशः Vcc भोल्टेजको 2/3 र 1/3 मा। सन्दर्भ गर्दै थ्रेसहोल्ड भोल्टेज टर्मिनल6को, जब यो आपूर्ति भोल्टेज वा Vcc को 2/3 नाघ्छ, तब आउटपुट उच्च तर्क स्तर (1) मा जान्छ र बिस्टेबलको आर इनपुटमा लागू हुन्छ, त्यसैले नेगेटेड आउटपुट 1 मा जान्छ, संतृप्त हुन्छ। ट्रान्जिस्टर र बाहिरी क्यापेसिटर को डिस्चार्ज सुरु गर्दै। एकै साथ, 555 को उत्पादन कम हुनेछ (0)।
En अर्को op amp, यदि इन्भर्टिङ इनपुटमा लागू गरिएको भोल्टेज Vcc को 1/3 भन्दा कम हुन्छ भने, एम्पलीफायर आउटपुट उच्च स्तर (1) मा जान्छ, यसरी बिस्टेबल इनपुट S लाई खुवाउने, यसको आउटपुटलाई निम्न स्तर (0) मा पास गर्दै, ट्रान्जिस्टर घुमाउँछ। बन्द छ र NE555 आउटपुटलाई तर्क उच्च बनाउँछ (1)।
अन्तमा, त्यहाँ पनि छ टर्मिनल रिसेट पिन ४ मा, बिस्टेबल फ्लिप फ्लपको R4 इनपुटमा जोडिएको छ। जब यो पिन सक्रिय हुन्छ तर्क कम (०), यसले NE1 को आउटपुटलाई कम (0) मा कुनै पनि समयमा रिसेट गर्न आवश्यक छ।
को NE555 को प्राविधिक विशिष्टताहरू, यद्यपि यो संस्करण र निर्माताको आधारमा भिन्न हुन सक्छ, तपाईले फेला पार्नुहुने सबैभन्दा सामान्य हो:
Vcc वा इनपुट भोल्टेज: 4.5 देखि 15V (त्यहाँ 2V सम्म संस्करणहरू छन्)। 5V TTL तर्क परिवारसँग मिल्दो छ।
हालको इनपुट (Vcc +5v):3देखि 6mA
इनपुट वर्तमान (Vcc 5v): 10 देखि 15mA
अधिकतम आउटपुट वर्तमान: 500 mA
अधिकतम शक्ति फैलिएको: 600 mA
न्यूनतम विद्युत खपत: 30mW@5V र 225mW@15V
सञ्चालन तापमान दायरा: 0ºC सम्म 70ºC। आवृत्ति स्थिरता 0,005% प्रति ºC हो।
NE555, यसको सबैभन्दा सामान्य प्याकेजमा छ 8 पिन। पिनआउट निम्न छ:
GND(1): बिजुली आपूर्तिको लागि नकारात्मक पोल हो, जुन सामान्यतया जमीनमा जान्छ।
शट वा ट्रिगर (२): यदि यो एक मोनोस्टेबलको रूपमा कन्फिगर गरिएको छ भने यो पिनले ढिलाइ समयको सुरुवात सेट गर्दछ। जब यो पिनमा आपूर्ति भोल्टेजको 1/3 भन्दा कम हुन्छ, ट्रिगर हुनेछ।
बाहिर निस्कनुहोस् वा बाहिर (3): जहाँ टाइमरको नतिजा प्राप्त हुन्छ, चाहे स्थिर मोडमा, मोनोस्टेबल, आदि।
रिबुट वा रिसेट (4): यदि यो ०.७ भोल्ट भन्दा तल जान्छ भने, यसले आउटपुट पिनलाई कम तान्छ। यदि यो पिन प्रयोग गरिएको छैन भने, टाइमरलाई रिसेट हुनबाट रोक्नको लागि यो पावरमा जडान हुनुपर्छ।
भोल्टेज नियन्त्रण वा नियन्त्रण (5): जब NE555 भोल्टेज कन्ट्रोलर मोडमा हुन्छ, यो पिनको भोल्टेज Vcc देखि लगभग 0V मा भिन्न हुन्छ। यस तरिकाले समय परिमार्जन गर्न सम्भव छ, वा यो पनि र्‍याम्प पल्स उत्पन्न गर्न कन्फिगर गर्न सकिन्छ।
थ्रेसहोल्ड वा थ्रेसहोल्ड (6): आउटपुट कम तान्न प्रयोग गरिने आन्तरिक तुलनाकर्ताको लागि इनपुट पिन हो।
डाउनलोड वा डिस्चार्ज (7): समयको लागि प्रयोग गरिएको बाह्य क्यापेसिटरलाई प्रभावकारी रूपमा डिस्चार्ज गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Vdc (8): आपूर्ति भोल्टेज हो, टर्मिनल जहाँ चिपलाई 4.5v देखि 16v सम्मको भोल्टेजहरू दिइन्छ।
सधै सम्झनुहोस निर्माताको डाटाशीट पढ्नुहोस्, विभिन्न 555 उत्पादनहरू बीच भिन्नता हुन सक्छ। साथै, यो पिनआउटसँग मिलाउन अगाडिको खाच माथितिर फर्किएको छ भनी ध्यान दिँदै, तपाईंले चिप सही रूपमा प्रयोग गरिरहनुभएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
555 को इतिहास
555 वा NE555 सर्किट थियो 1971 मा हान्स आर क्यामेनजिन्ड द्वारा डिजाइन गरिएको। म त्यतिबेला Signetics (हाल NXP सेमिकन्डक्टरको स्वामित्वमा रहेको) का लागि काम गरिरहेको थिएँ। ह्यान्ससँग पहिले नै यस प्रकारका परियोजनाहरूमा अनुभव थियो, पहिले एम्पलीफायरहरू डिजाइन गर्दै पल्स चौडाइ मोडुलेशन (PWM) अडियो उपकरणको लागि, उहाँ PLLs, आदि मा पनि रुचि राख्नुभयो।
Camenzind विकास गर्न Signetics लाई प्रस्ताव गर्नेछ एक विश्व सर्किट PLLs मा आधारित छ र आफ्नो तलब आधा कटौतीको सट्टामा कम्पनी स्रोतहरू प्रयोग गरी कम्पनी व्यवस्थापनलाई आफैं विकास गर्न अनुरोध गर्नेछ। कम्पनीको मार्केटिङ प्रबन्धकले प्रस्ताव स्वीकार गरे, यस तथ्यको बावजुद अन्य कम्पनी सहकर्मीहरूले दावी गरे कि भविष्य 555 को कार्यक्षमता अन्य अवस्थित चिपहरूसँग प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
आयोजना लाग्ने हो एनालग IC लाई तोकिएको 5xx नम्बरिङ। र अन्तमा नम्बर 555 चयन गरिनेछ। पहिलो डिजाइन 1971 मा परिमार्जन गरिनेछ र, कुनै त्रुटि नभए पनि, यसमा9पिनहरू थिए। क्यामेनजिन्डसँग स्थिर वर्तमान स्रोतको सट्टा प्रत्यक्ष प्रतिरोधक प्रयोग गर्ने विचार थियो र पिनको आवश्यकतालाई हालको 8 मा घटायो।
8 पिनको साथ कार्यात्मक डिजाइन खर्च हुनेछ दोस्रो डिजाइन समीक्षा र प्रोटोटाइप अन्ततः अक्टोबर 1971 मा पेश गरिएको थियो। पहिलो समीक्षा मा उपस्थित सिग्नेटिक्स इन्जिनियरहरु मध्ये एक अर्को कम्पनी खोज्न जान्छ र आफ्नै 9-पिन संस्करण बनाउने थियो। यस बीचमा सिग्नेटिक्सले NE555 लाई सकेसम्म चाँडो निर्माण र मार्केटिङ गर्न थाले। 1972 मा यो 12 कम्पनीहरु द्वारा निर्मित र सबै भन्दा धेरै बिक्री सर्किट मध्ये एक बन्यो।
entre NE555 आवेदनहरू त्यहाँ एक टाइमर वा सटीक टाइमर हुन ती छन्। यद्यपि यो मूल रूपमा एक सटीक ढिलाइ सर्किटको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो, यसले चाँडै असंख्य अनुप्रयोगहरू फेला पार्‍यो जस्तै अस्टेबल ओसिलेटर, र्‍याम्प जेनेरेटर, अनुक्रमिक टाइमर, इत्यादि। यसरी यो आज पनि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने चिप्स मध्ये एक बन्यो।
को NE555 कन्फिगरेसनहरू तिनीहरू तिनीहरूको पिनमा जडान गरिएका क्यापेसिटरहरू र प्रतिरोधकहरूको श्रृंखलासँग बनाइएका छन्। यसरी तपाईले यो IC को सञ्चालनको समय वा मोडहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केहि सबैभन्दा सामान्य सेटिङहरू छन्:
मोनोस्टेबल कन्फिगरेसन: यस अवस्थामा, NE555 को आउटपुट सुरुमा0(निम्न स्तर) हुनेछ, र क्यापेसिटर C1 लाई चार्ज गर्नबाट रोक्न ट्रान्जिस्टर संतृप्त हुनेछ। यदि पुशबटन थिचिएको छ भने, ट्रिगर टर्मिनलमा कम भोल्टेज लागू हुन्छ र लेचलाई स्थिति परिवर्तन गर्न र आउटपुट 1 (उच्च स्तर) मा जान्छ। त्यस अवस्थामा, आन्तरिक ट्रान्जिस्टरले सञ्चालन गर्न रोक्छ र क्यापेसिटर C1 बाह्य प्रतिरोधी R1 मार्फत चार्ज हुन्छ। जब क्यापेसिटर भोल्टेज आपूर्ति भोल्टेज (Vcc) को 2/3 भन्दा बढी हुन्छ, bistable ले आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्छ र आउटपुट0मा फर्किन्छ।
अस्थिर: यो अन्य कन्फिगरेसनमा, जब यो पावर सप्लाईमा जडान हुन्छ, क्यापेसिटर डिस्चार्ज हुन्छ, र NE555 आउटपुट उच्च हुन्छ (1) जब सम्म क्यापेसिटर यसको लोडको साथ Vcc को 2/3 सम्म पुग्दैन। त्यस क्षणमा, RS फ्लिप-फ्लप स्तर परिवर्तन हुन्छ र 555 आउटपुट0वा कम हुन्छ। त्यस क्षणमा, क्यापेसिटर C1 (वा छविमा C) रेसिस्टर R2 मार्फत डिस्चार्ज हुन थाल्छ र जब यो आपूर्ति भोल्टेजको 1/3 पुग्छ, आपूर्ति कायम रहँदा फेरि चार्ज हुन थाल्छ।
एक क्यापेसिटर प्रयोग गर्दा डिस्चार्जको रूपमा चार्ज गर्न उही समय लाग्छ, एक स्थिर सममित तरंग कन्फिगरेसन प्राप्त गर्न सकिन्छ।
रिसेटको लागि कन्फिगरेसन: यदि तपाइँ सर्किट रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ रिसेट टर्मिनललाई सीधा सकारात्मक पोलमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ वा रेसिस्टरको माध्यमबाट स्तर उच्च राख्न सक्नुहुन्छ। जब निम्न रेखाचित्रमा देखाइएको बटन कार्यान्वित हुन्छ, NE555 मा आउटपुट0हुनेछ जब चाहिएको छ। यो टाइमर रिस्टार्ट गर्नु वा सुत्ने अवस्थामा राख्नु जस्तै हो।
पल्स चौडाइ मोडुलेशन (PWM): NE555 को नियन्त्रण इनपुटमा चर स्तर संकेत लागू गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा यो भोल्टेजको स्तर बढ्दै जाँदा आउटपुट पल्स चौडाइमा बढ्छ। पल्स पनि कम वा कम ढिलाइको साथ आइपुगाउन सकिन्छ किनकि नियन्त्रण इनपुटमा लागू भोल्टेज बढ्छ वा घट्छ।
सस्तो NE555 कहाँ किन्न
तपाईले यसलाई धेरै विशेष इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि यो अमेजनमा राम्रो मूल्यहरूमा फेला पार्न पनि सजिलो छ। केही सिफारिस गरिएका उत्पादनहरूको उदाहरणहरू तिनीहरू छन्:
50 पल्स जेनरेटर NE555P संग केस
NE555 मोड्युल Arduino को साथ अझ सजिलै प्रयोग गर्न सक्षम हुन।
10 NE555N एकाइहरूको प्याक तिनीहरूको संगत सकेटहरूसँग।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू » NE555: यो बहुउद्देश्यीय चिप बारे सबै